Timo-saarayaasha Laas-Bixinta Timaha Ka Saarta Iyo Warshadda | Shiinaha Soosaarayaasha Saarista Laser
Mashiinka leysarka diode ee la qaadan karo 808nm
Qalabka cusub ee 808nm diode laser wuxuu leeyahay seddex dherer, marka laga reebo tiknoolajiyadda 808nm ee dhaqameed, waxay ku dareysaa laser 1064nm iyo laser 755nm. Badeecadani waxay buuxineysaa baahiyaha midabka maqaarka ee kala duwan, Midabka maqaarka ee kala duwan, laser-ka dhameystiran wuxuu siinayaa macaamiisha dareen wanaagsan oo waayo-aragnimo ah, saameyntuna way ka sii fiicantahay.
Mashiinkaan IPL waa nooc caan ah, shaashaduna waa 8 inji oo ah shaashadda taabashada midabka dhabta ah, awoodda waa 1200w, nolosha nalku waxay ka badan tahay 300 000 tallaal. Waxay ku leedahay 3 miiraha mashiinka, waxaad dooran kartaa miirayaal badan haddii aad u baahato.
755nm mashiinka timo jarista alexandrite laser
Moodelkani waa 755nm aaladda alexandrite laser-ka-saarista, wuxuu ku habboonaan karaa nooc kasta oo maqaarka ah, nooc kasta oo timo ah, waa mashiinka laser-ka-saarista timaha ee ugu habboon Uma baahnid inaad maqaar ku marin maqaarka, Ma jiro xanuun, timo joogto ah oo laga saaro, Kulamo Yar Kalfadhiyada 3-4, Xabadu ma laha xuduudo, waqti dheer oo shaqeynaya, biyo, hawo, nidaamka qaboojiyaha semiconductor.
1064nm 755nm qalabka garaaca timaha garaaca wadnaha dheer
1064nm laser garaaca wadnaha dheer ayaa ah tiknoolajiyad aad u saafiya, Waxay leedahay codsiyo kala duwan, timo ka saarid, xoqitaan nabar, erythema, sarcoma, iyo wax saameyn ah ma lahan. Dhanka timaha laga saarayo, mashiinka garaaca wadnaha dheer ee 1064nm ayaa ah tiknoolajiyadda ugu waxtarka badan uguna amaanka badan. Timaha madow iyo bunni, saameynta timo ka saaristu aad ayey muhiim u tahay. Intaa waxaa sii dheer, waxaan ku dari karnaa nidaamka 755nm, Aad ugu haboon timo cad iyo midab khafiif ah。
Mashiinka saarista timaha leysarka alexandrite ee horumarsan
Mashiinkaan timaha looga saarayo timaha ayaa ah midka ugu waxtarka badan uguna horumarsan, waxtar u leh nooc kasta oo maqaarka ah iyo midabka timaha, garaaca wadnaha ayaa ah 100ms, timaha gaagaaban ee timaha gaagaaban, xanuun ma leh, looma baahna in la mariyo jel.
1064 mashiinka saarista timaha garaaca wadnaha dheer
Mashiinkaan moodelku waa 1064nm long pulse nd yag laser cut machine, wuxuu waxtar weyn u leeyahay saarista timaha nooc kasta oo maqaarka ah, midabka timaha, sida dahabka iyo cawlka, looma baahna in la mariyo gel, fadhi ka yar.
Mashiinka leyska diode dhererkiisu yahay 755nm / 808nm / 1064nm
Vertical three wavelength 755nm / 808nm / 1064nm waa makiinad timaha ka saareysa, baararka Jarmalka, tayada waa qumman tahay, seddex dhererna waa lagu dhejin karaa maqaarka midabkiisa kala duwan. Muhiim muhiim ah, ma laha xanuun in timaha laga saaro. Haddii kale, loogu talagalay naqshadeynta xarrago leh, Waxay caan ku tahay warshadaha qurxinta.
nidaamka qaboojinta dhamaadka sare 808 mashiinka saarista timaha laser laser diode
Moodalkan 808 diode laser-ka mashiinka saarista ayaa ah midka ugu fiican ee aan haysanno, wuxuu leeyahay nidaam qaboojin gaar ah, wuxuu mashiinka ku hayn karaa waqti dheer, 600w, muuqaal fiican oo raaxo leh.waxaan ku dari karnaa astaantaada astaanta bilaash nidaamka.
laser diode 808 qalab qurux badan oo loogu talagalay ka saarista timaha
Moodelkan nooca laser la qaadan karo qaabka diode 808 mashiinka saarista timaha ayaa ah iib kulul, hal sano oo dammaanad qaad ah, talaalada ayaa gaari kara 2000 0000, Jarmalka lasler bar laga soo dhoofiyo, daaqada laser-ka waxaad dooran kartaa 12 * 20 12 * 10, ka saarida timaha leysarka oo aan xanuun lahayn.
mishiinka timo soo saarida diode laser 808nm
Moodalkan 808nm diode laser machine miiraha waa mid aad u kulul iibinta, oo leh tayo sare iyo qiimaha ugu fiican, daaweyntu waa mid aan xanuun lahayn oo joogto ah, talaalada ayaa gaari kara 2000 0000, qalabka laydhka jarmalka la soo dhoofiyo ayaa lagu xayeysiin karaa sumadda sumaddaada nidaamka bilaash .
ipl laser mashiinka saarista timaha ee tooska ah
Mashiinkaan timaha looga saarayo timaha ayaa ah mashiinka timaha laga jarayo ipl, waxaan u habeyn karnaa midabka qolofta, gacanka, waxaad dooran kartaa oo kaliya ipl xamuul, ama laba ipl xamuul ah, ama ipl rf q bedelay nd yag sade gacan. Ku soo dhawow inaad u dirto baaritaan anaga
ipl nd yag laser 2 mashiinka 1
Kani waa moodel iibiyaha kulul ee 2 2 mashiinka timaha laysarka ipl laser ee qurxinta qurxinta, waxay noqon kartaa labadaba timo saarista iyo ka saarista tattoo, tayo sare leh iyo qiimaha ugu fiican, fadlan nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad faahfaahsan